भोलि भदौ १८ गते बिहिबार, कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नुहोस दैनिक राशिफल! – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /Horoscop/भोलि भदौ १८ गते बिहिबार, कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नुहोस दैनिक राशिफल!
आर्थिक लाभ मिल्ने सम्भावना रहेको छ। सामाजिक जीवनमा मान-सम्मान बढ्नेछ। व्यापार क्षेत्रमा लाभ मिल्नेछ। मध्यान्हपछि स्वास्थ्यमा समस्या आउनसक्छ। पूँजी निवेश गर्दा ध्यान दिनुहोला, हानि नहोस्। सवारी साधन सावधानपूर्वक प्रयोग गर्नुहोला।
शारीरिक तथा मानसिक रूपले स्वस्थ्य महशुस गर्नुहुनेछ। पारिवारिक वातावरण सुख-शान्तिमय रहनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा सफलता मिल्ने देखिन्छ। मध्यान्हपछि नयाँ कार्य सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ्नेछ।
व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा समय अनुकूल रहनेछ। अत्याधिक खर्च हुँदा आर्थिक समस्याले सताउन सक्छ। कार्यक्षेत्रमा समय अनुकूल नरहला। मध्यान्हपछि भने समय अनुकूल होला। स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। आर्थिक लाभ मिल्ने योग रहेको छ।
अनैतिक कार्य गर्नबाट बच्नुहोला। वाणी तथा क्रोधमा संयम राख्न जरूरी देखिन्छ। शारीरिक तथा मानसिक अस्वस्थताको अनुभव हुनेछ। मध्यान्हपछि शुभ समाचार मिल्ला। अनावश्यक वाद-विवादमा नपर्नुहोला। कार्यक्षेत्रमा उच्च पदाधिकारीसँग मनमुटावको स्थिति आउला।
स्वास्थ्यको हिसाबले यस दिन राम्रो रहनेछ। मित्र तथा आफन्तसँग घुमफिर गर्ने अवसर मिल्नेछ। सामाजिक मान-सम्मान प्राप्त हुनेछ। मध्यान्हपछि भने मानसिक तनाब बढ्न सक्छ। खर्चमा वृद्धि हुँदा आर्थिक पक्ष कमजोर रहला। वाणीमा संयम राख्नुहोला।
सोचे अनुसार कार्य सफलता मिल्नेछ। शारीरिक तथा मानसिक रूपले प्रशन्नता रहनेछ। महिलाको माइती पक्षबाट शुभ समाचार मिल्ने सम्भावना छ। परिवारमा सुख-शान्तिमय वातावरण रहनेछ। यात्राको योग बन्ने देखिन्छ। प्रसिद्धि र ख्याति पनि बढ्नेछ।
बौद्धिक तथा लेखन क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। मानसिक तनाब बढ्नेछ। यात्रा गर्दा विशेष सावधानी अपनाउनुहोला। आकस्मिक धन खर्च होला। मध्यान्हपछि कार्य सफलता मिल्दा मानसिक प्रफुल्लताको अनुभव होला। व्यापार क्षेत्रमा समय अनुकूल रहने देखिन्छ।
विद्यार्थी वर्गको लागि समय शुभ रहेको छ। नयाँ वस्त्र प्रप्त्र हुनेछ। खर्चमा वृद्धि हुनेछ। भविष्यको लागि आर्थिक योजना बनाउनको लागि समय उचित छ। मध्यान्हपछि वैचारिक स्थिरता नरहला। नयाँ कार्य सुरु गर्नको लागि समय शुभ छैन।
शारीरिक तथा मानसिक रूपले स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। यात्राको योग बन्नेछ। मित्र तथा आफन्तसँग आनन्दमय समय बित्नेछ। मध्यान्हपछि भने स्वास्थ्यमा समस्या आउनसक्छ। नयाँ कार्य गर्नको लागि दिन अनुकूल छैन।
धार्मिक आयोजनामा खर्च हुनेछ। परिवारमा मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुनसक्छ। अनावश्यक वाद-वादमा नपर्नुहोला। मध्यान्हपछि मन प्रफुल्ल रहनेछ। भाग्य वृद्धिको योग रहेको छ। स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। यात्राको योग छ। प्रिय व्यक्तिसँगको भेटले मन प्रशन्न रहला।
शारीरिक प्रशन्नता तथा मानसिक प्रफुल्लता रहनेछ। नकारात्मक सोच मनबाट हटाउनुहोला। आध्यात्मिक विषयमा रुचि बढ्नेछ। मध्यान्हपछि धार्मिक कार्यमा मन लाग्नेछ। धन लाभ मिल्ने सम्भावना छ। विद्यार्थीको लागि समय अनुकूल रहनेछ।
आर्थिक लेन-देन गर्नको लागि दिन उचित छैन। कानुनी चक्करबाट टाढा नै रहनुहोला। वाणी तथा क्रोधमा संयम राख्नुहोला। धार्मिक तथा आध्यात्मिक कार्यमा मन लाग्नेछ। साथीबाट उपहार मिल्दा मन प्रशन्न रहनेछ। परिवारमा सुख-शान्तिमय वातावरण रहनेछ।
आज मिति २०७७ चैत ३० गते सोमवार तपाईंको राशीफल ।